आज माघे संक्रान्ति, कहाँ कसरी मनाउँछन् ? – Everest Times News
आज माघे संक्रान्ति, कहाँ कसरी मनाउँछन् ?
२०७६ माघ १, बुधबार ११:५९
काठमाडौँ — आज माघ १ अर्थात् माघे संक्रान्ति । मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी माघे संक्रान्ति मनाइँदै छ । सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने सङ्क्रान्ति भएकाले माघ १ गतेलाई मकर (माघे) सङ्क्रान्ति भनिन्छ । माघ १ गतेदेखि उत्तरायण शुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटो हुँदै जान्छन् ।
उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान साधना, दान आदिलाई पुण्य दायक मानिन्छ । यसैले आजको दिन देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, वाग्मती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडीलगायतका स्थानमा माघ स्नान गर्ने भक्तजनको भीड लाग्छ । यी ठाउँमा आज विशेष मेलासमेत लाग्ने गर्छ ।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा आज नरहरी पर्व मनाउने गर्छन् । सूर्य उत्तरायण प्रवेश गर्ने दिन आज मिठा परिकार खाने चलन छ । आजका दिन जलाशयमा स्ना गरी पूजाआजा गर्ने र आफन्त भेला भएर खानपिन तथा रमाइलो गर्ने परम्परा छ ।
थारु समुदायले माघ १ गतेलाई नयाँ वर्षका रुपमा धुमधामका साथ स्नान, दान, एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाउँदै छन्। माघ १ गते थारु समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात् माघी पर्व पर्दछ । यो पर्वलाई ठाउँअनुसार विभिन्न नाम पनि दिने गरिएको छ । माघ १ गतदेखि पाँच दिनसम्म धुमधामका साथ तराई क्षेत्रमा यो पर्व मनाइन्छ । माघ १ गते बिहानै जलाशयमा गई स्नान, पूजा गरी ठूलाबडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिने परम्परा थारु समुदायको छ ।
गाउँका मुखिया सबै मिलेर छनोट गर्ने चलन छ । यस पर्वका अवसरमा महतो, गुरुबा, पूजारी, धामी, झाँक्री, चौकीदार, कमैया, हली, गोठालो, घरायसी काम गर्ने आदि सबै पदवीको आजै लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन हुने गरेको छ।
धर्मसिन्धुमा माघ १ मा घ्यू, चाकु, तिलका परिकार, खिचडी नखाने, दान नगर्ने, जलाशयमा गई स्नान नगर्ने, ध्यान नगर्ने व्यक्ति जीवनभर रोगी हुने उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताए ।
प्राचीन मिथिलामा ‘तिला सङ्क्रान्ति’ पर्व पनि भन्ने गरिन्छ । यस अवसरमा पवित्र नदी र तलाउँमा स्नानका गरी खिचडी, अन्न, नयाँ वस्त्र र नगद दान गरेमा पुण्य प्राप्तिका साथै सूर्यदेव प्रसन्न हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । सो धार्मिक महत्वको आधारमा जनकपुरको गङ्गासागर, धनुषसागरलगायत पवित्र जलाशयमा बिहानैदेखि सयौँको सङ्ख्यामा धर्मालम्बीहरु स्नान गरी विभिन्न मन्दिरमा धार्मिक विधिपूर्वक पूजापाठ गरी पर्व मनाइरहेका छन् ।
यस पर्वको पहिचानको रुपमा खिचडी, दाल, तिलको लड्डु र शख्खर रहेको छ । अनिवार्य रुपमा तिलको लड्डुलगायतका परिकार तयार गरिएपनि कतिपय समुदायमा खिचडीको सट्टा दही च्युरा खाने गरिन्छ । यो पर्व उत्साहसँग जोडिएको कारणले आजका दिन चङ्गा उडाउने गरिन्छ । हुन त विगतका वर्षका तुलनामा चङ्गा उडाउने मनोरञ्जनात्मक खेल क्रमिक रुपमा घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।
मकर सङ्क्रान्तिमा खिचडीको महत्व
मकर सङ्क्रान्तिका दिन खिचडी खानुको मुख्य कारणको रुपमा ग्रहहरुको स्थितिलाई बलियो बनाउनुरहेको विश्वास गरिन्छ । पौराणिक कथानुसार, खिचडी बनाउने सामग्रीमा चामल चन्द्रमा, कालो दाल शनि, हरियो तरकारी बुध, हल्दी वृहस्पति र नून शुक्र ग्रहको प्रतीक हो ।
यी सामग्रीहरु मिश्रण गरी तयार पारिएको खिचडी खाएमा सबै ग्रहहरु शान्त हुन्छ । घरमा शान्ति र समृद्धि आउने र ग्रहहरु बलियो हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । अर्को कथानुसार, मकर सङ्क्रान्तिका दिन खिचडी खाने परम्परा बाबा गोरखनाथले शुभारम्भ गरिएको उल्लेख गरिएको देखिन्छ । हिन्दू धर्ममा उत्तरायण सूर्यको आफ्नै विशिष्ठ महत्व रहेको छ । यसको महत्व द्वापर युगमा सम्पन्न महाभारत युद्धमा गम्भीर घाइते भएका भीष्म पितामहको इच्छा मृत्युको समय अवधिसँग जोडिएर देख्न सकिन्छ ।
इच्छा मृत्युको बरदान पाउनु भएका भीष्म पितामह महाभारतको युद्धमा गम्भीर घाइते भई मृत्यु शै्या रहनुभएका उहाँ सूर्य उत्तरायणमा पुगेपछि माघ अष्टमीको दिन स्वेच्छाले प्राण त्याग गर्नुभएका थिए । तसर्थ, हिन्दूधर्ममा सूर्यउत्तरायणको अवधिमा प्राण त्याग हुनु उत्तम मानिएको छ । सोही कारणले आज पितृलाई प्रसन्न गर्न तिल र जलले अघर््य एवं तर्पन गर्ने गरिन्छ ।
आज सन्तानलाई शपथ खुवाइन्छ
मिथिलावासीले आज यस पर्वको अवसरमा आफ्ना सन्तानलाई शपथ खुवाएर पर्व मनाउने गर्छन् । घरमा देवीदेउताको पूजापाठ गरेपछि तिल र शख्खर मिश्रित प्रसाद खुवाउने क्रममा सन्तानसँग बचन लिने गरिन्छ । बुढेसकालमा ‘सेवा गर्ने कि नगर्ने’ भनेर मातापिताले सोध्ने गर्छन् । सन्तानले सेवा गर्ने, आज्ञाको पालना गर्ने बचन दिएपछि सो प्रसाद मातापिताले सन्तानलाई खुवाउने गर्छन् । प्रसाद ग्रहण गरेपछि सन्तानले आमाबुबालाई ढोगेर आर्शीवाद लिने गर्छन् । यसका साथै, आजका दिनमा अर्काको तिल खाएमा उनको सेवा गर्नुपर्ने भनाइका कारण कतिपयले अरुले दिएको तिलको लड्डु नखाने गरेको देखिन्छ ।